Posted by တန်ခူး at 12:23 PM
"Happy 7th Anniversary" ပါ...
တနည်းအားဖြင့်တော့ Copper Anniversary ပေါ့...
ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်တွေကို ချစ်သော မောင်၊ ချစ်သော သားလေး တို့ နဲ့ အတူတူ အနှစ်တစ်ရာတိုင် ကုန်လွန်နိုင်ပါစေ...
တန်ခူးရေးထားတာ အစအဆုံး တပြုံးပြုံးဖတ်ရင်း မင်္ဂလာဆောင်မှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တွေ အကုန်လုံး ထပ်တူညီနေတာ တွေ့ ရပြန်တယ်... တကယ့်ကို ချွတ်စွပ်ပါဘဲ တန်ခူးရေ...
သက်ဝေတုံးကတော့ ဗိုက်အောင့်နေလို့ လွယ်လွယ်ကူကူ သောက်လို့ ရတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးမျိုး ရှာထားပေးပါလို့ စင်ပေါ်ကနေတဆင့် လှမ်းပြောထားတာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စကားတွေ လက်ဆင့်ကမ်း မှာကြားရင်း နောက်ပိုင်းကြတော့ ဗိုက်အောင့်တာ ဘယ်သူမှန်းလဲ မသိကြတော့... ဆေးကလဲ ကိုယ့်လက်ထဲကို မရောက်လာ... ဗိုက်အောင့်လျက်သားနဲ့ ဧည့်သည်တွေ အပြန်မှာ နှုတ်ဆက်ရတော့ လူကမချိပြုံးတောင် ပြန်ပြုံးပြဖို့ အနိုင်နိုင်...
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ... ဒီလိုနဲ့ ဘဲ... အချိန်ကုန်အောင် ကြိုးစားပမ်းစား ပြုံးခဲ့ရပါတယ်။
အဲသည်တုန်းက တန်ခူးတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကို လာတက်တဲ့ ဧည့်သည်တွေထဲမှာ အညာသားချောချောလေးတယောက်ရယ်၊ သူ့ဇနီးကလေးရယ်၊ သူဇနီးဗိုက်ထဲက သမီးလေးရယ် သုံးယောက်ပါတယ်နော်။ ကောင်လေးက ပန်းတွေ သယ်ပေးခဲ့ရပေမယ့် မလေးပါဘူးတဲ့။ အခုလို အမှတ်တရ ပြန်ဖတ်ရတော့ ပိုသတိရစရာပေါ့။
မှတ်မိသေးတယ်။ ရန်ကုန်ကို ရောက်ရောက်ချင်းဆိုသလို ဆရာကြီးအိမ်သွားလည်တော့ ဆရာကြီးက သူ့သမီးတန်ခူးရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းအကြောင်းကို ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ဖောက်သည်ချလေရဲ့။ ဘာတဲ့…သူပြောတဲ့အထဲမှာ လူကြီးစုံရာနဲ့ စကားပြောကြတော့ အဲဒီထဲမှာ စကားပြောပေးတဲ့ တယောက်က နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ “တောတွင်းသားလေး ဖိုးညိုဆိုလား ဘာဆိုလား” ပြောလို့ ကျနော်တို့ ရယ်ကြရသေးတယ်။
သြော…အတိတ်အကြောင်းကို အားပါးတရ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဆုတောင်းပေးဘို့ ကျန်သွားတယ်။ ဧပရယ်လ်မှာ ထူးခြားမှုတွေကြုံကြိုက်တတ်တဲ့ တန်ခူးအတွက် ယခု မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကစလို့ ဘ၀မှာ အစစ ကိုယ့်အပေါ်အနွံတာခံသော ဟိုလူကြီးနှင့် ချစ်စရာသားကလေးနှင့် အမြဲ မိသားစုမခွဲမခွာ နှစ်တွေများစွာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်ဆိုးဆိုး အညာသားလေးဘေးက ပန်းရောင်အင်္ကျီလေးနဲ့လှနေတဲ့ ( ဟဲ ဟဲ ) မဗိုက်ကိုလဲသတိရမယ်ထင်ပါရဲ့။
၂၀၀၁ အေပရယ် မှ အေပရယ် အယ်နီဗာစရီ ပေါင်း များစွာကို တန်ခူး နဲ့ မောင် တို့နှစ်ယောက် သားသား မီးမီး မြေးမြေး မြစ်မြစ် တွေနဲ့အတူဆင်နွှဲနိုင်စေကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
တန်ခူးရေ လာပြီး ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ။ ထာဝရ ရွှေလက်တွဲလို့ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ကြင်နာနိုင်ကြပါစေဗျာ ။
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည်.. နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်..ရွှေလက်တွဲလို့ သံသရာခရီးကို တူတူ ဖြတ်ကျော်နီုင်ပါစေ..။
မတန်ခူးရေ.. Happy Anniversary ပါနော်.. (ဟဲ..ဟဲ.. ပို့စ်ထဲမှာ ဖတ်တုန်းကတော့ ၇ နှစ်မြောက်ဆိုတာ သိဘူး။ အခု မသက်ဝေပြောပြတော့ သိသွားပြီ။) မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင် ခန်းမထဲရောက်သွားသလိုပဲ။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မိသားစုနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းရပါစေ.. မရေ..
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ တိမ်ပြာပြာနေ့ တနေ့ Sunday နေ့ အကြောင်းကို ဖတ်သွားပါတယ်
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ သားတစ်ရာ မြေးတစ်ဖျာနဲ့ (လိုချင်တယ် ဟုတ်) ဘ၀ခရီးမှာ လက်တွဲရင်း ရှေ့ဆက်နိုင်ကြပါစေ။
အားကျ၏ ကျွန်တော် က ဒီနှစ်ထဲ ၆ နှစ် ပြည့်မှာ :P
မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ကျွန်တော် မျက်မှန် ချွတ်ထားတယ် အဟိ :P
အခုတလော မုန်တိုင်းသတင်းတွေနဲ့စိတ်ရှူပ်ပြီး လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်နှူတ်မဆက်နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ 
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ သက်ဝေရေ… သက်ဝေတုံးကတော့ ဗိုက်အောင့်နေတော့ ပိုဆိုးမှာပေါ့နော်….
ကိုပေါ+ညီမလေးရေ… အညာသားချောချောလေးရယ်၊ သူ့ဇနီးချောချောလေးရယ်၊ သူဇနီးဗိုက်ထဲက သမီးလေးရယ် တက်ညီလက်ညီ ချီးမြှင့်တာ ဘယ်မေ့ပါ့မလဲ…ဆရာကြီးကို လွမ်းလိုက်တာ……
ခုလို ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါကိုတာတူးရေ…
ခုလို ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါမြတ်နိုးရေ…
လာရောက်ဖတ်ရှူသွားတာ ကျေးဇူးပါကောင်းကင်ကို…..
သားတစ်ရာ မြေးတစ်ဖျာ….ဟင့်အင်း..မလိုချင်ဘူး…သားတကောင်နဲ့ ပဲပြာနေပြီ ပန်ရေ…ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ
မျက်မှန်ချွတ်ထားတော့ သတို့ သမီးကို ကောင်းကောင်းမြင်ရရဲ့ လား ကိုစိုးထက်ရေ…နောက်တာနော်….